Zifa inokara mari: Shereni | Kwayedza
06 Dec, 2019 - 00:12	 2019-12-05T15:39:21+00:00 2019-12-06T00:00:36+00:00 0 Views
SHASHA yakambonetsa ichitambira nhabvu maWarriors, Dynamos nezvimwe zvikwata zvekuEurope — Harlington Shereni — anoti vakambotamba mutambo uyu vanovharirwa kunze pose pavanoda kuita zvirongwa zvekusimudzira nhabvu nesangano reZimbabwe Football Association (Zifa) iro raanoti rizere nevanhu vane makaro emari.
Shereni mumwe wevakatamba nhabvu yepamusoro izvo zvakamuona achitambira kuEurope kwemakore akawanda kuzvikwata zvinosanganisira SR Delemont yekuSwitzerland kozoti Istres, Guingamp, Nantes neStrausborg zvekuFrance.
Muchinda uyu aive muchikwata chemaWarriors chekutanga kuenda kunokwikwidza kuAfrica Cup of Nations kuTunisia.
“Isu sevakambotamba nhabvu kare tine rudo rwekusimudzira mutambo uyu asi tinopedzisira tasvika pakuneta nekuti hutungamiri hwenhabvu yemuno vanokupedza simba. Havana rudo nenhabvu asi chavanongoda imari chete, kunyangwe pakauuya vatsva vanoshanda semashandiro aiita vanenge vabva.
“Kuti zvinake, panodiwa munhu akatamba nhabvu yepamusoro kwete munhu wese wese,” anodaro Shereni.
Parizvino Zifa iri kutungamirirwa naFelton Kamambo uyo akambotamba nhabvu kuchikwata cheMhangura Football Club.
Asi, mumaonero aShereni anoti chigaro ichi chinoda munhu akatamba nhabvu yepamusoro-soro.
“Ndofunga yasvika nguva yekuti isu takambotamba nhabvu tikwikwidze musarudzo idzi dzekusarudza mutungamiri weZifa
“Uye munhu anofanirwa kunge akaona nekutamba nhabvu yepamusoro kuti aunze shanduko munhabvu yemuno,” anodaro.
Shereni — uyo akaberekerwa ndokukurira kuChiredzi — anoti anoda kusimudzira mutambo wenhabvu kuChiredzi.
“Ndiri kushanda kuti ndisimudzire nhabvu kuChiredzi kwandakabva uye kutanga gore rinotevera tichange tichiita mitambo yakasiyana tichibika tarenda revatambi vari kusimukira. Tiri kutsvaga vanokwanisa kukotsvera kuti basa iri ritange,” anodaro Shereni.
Mutauriri weZifa Xolisani Gwesela anoti havasati vakamboona chinyorwa chinobva kunaShereni chekuti anoda kusimudzira mutambo wenhabvu muno.
“Hatisati tamboona kana zvaakambonyora achiti anogona kushandura nhabvu muno saka zvaari kutaura zviri kubvepi? Mari ipi iri kudyiwa?
“Nhabvu yakavhurika kumunhu wese uye tinotambira pfungwa dzevamwe idzo dzinoshandura nhabvu zvichiita kuti ikure,” anodaro Gwesela.
Anoenderera achiti, “Hapana akambomurambidza kuti akwikwidze musarudzo dzekusarudza hutungamiri hweZifa uye kana achiona kuti anogona kutungamira akasununguka kukwikwidza musarudzo dzinotevera, asi hunge kana achizadzikisa zvinodiwa zvinotarisirwa kuti ukwikwidze musarudzo dzeZifa.”